अफिस गएर मस्तसँग सुत्नुस् तलब पाक्छ ! « Khabarhub
अफिस गएर मस्तसँग सुत्नुस् तलब पाक्छ !
एजेन्सी– कतिपय मानिसलाई कार्यालयको कामसँग दिक्क लाग्छ । कतिपय मानिसहरु कामको चाप बढी भएर तनावमा हुन्छन् । तर संसारमा यस्ता पनि कम्पनी छन् जहाँ मस्त सँग निदाए बापत उल्टै पैसा पाइन्छ ।
यो सुविधा जापानको हो । जापानको एक कम्पनीले आफ्नोमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई पूरा निन्द्रा सुत्नका लागि पैसा दिने गर्दछ । क्रेजी इंक नामक उक्त कम्पनीले आफ्ना सबै कर्मचारीका लागि पूरा निद्रा सुत्नका लागि पैसा दिने गरेको बताइन्छ ।
समाचारमा जनाइएअनुसार कम्पनीले सबै कर्मचारीलाई नम्बर दिन्छ । अनि, त्यही नम्बर अनुसार जुन कर्मचारी हप्तामा पाँच दिन हरेक रात कम्तीमा ६ घण्टा सुत्दछन् उनीहरुले हरेक वर्ष ६४ हजार येन अतिरिक्त रकमको रुपमा पाउँदछन् ।
जापानमा मानिसहरु अत्यधिक मात्रामा काम गर्ने र आरामका लागि पर्याप्त समय नछुट्टाउने कारणले गर्दा धेरै मानिसको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ । त्यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले त्यस्तो नियम बनाएको हो ।
प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७६, सोमबार ८ : ११ बजे